Nayjeeriya oo Lacag Siinaysa Mintidiinta Niger Delta - BBC Somali
Nayjeeriya oo Lacag Siinaysa Mintidiinta Niger Delta
Lix bilood ka hor ayey ahayd markii ay dawladdu joojisay inay dagaalyahannada lacag siiso. Laakin wixii markaa ka dambeeyey waxaa jiray weerarro is xigxigay oo loo gaystay dhuumaha shidaalka, taasoo hoos u dhigtay wax soo saarka.
Qaska ayaa wuxuu sidoo kale dhirbaaxo weyn ku yahay xukuumadda oo seddex meelood oo meel dakhligeedu ku tiirsan yahay iibka shidaalka. Iminka afhayeen u hadlay barnaamijka cafiska ayaa sheegaya in mushaarka bil kasta oo ah 200 oo Doollar uu noqonayo luush dhanka nabadda loo bixinayo, kaasoo sii abaalmarinaya mintidnimada halkii uu wax ka qaban lahaa.
Weli ma cadda haddii sii wadidda lacagtaas la bixinayo ay ku qancayaan mintidiinta weerarrada qaada. Qaarkood ayaan cafiska lagu darin. In badan oo ka mid ah ayaa ku doodaya in gobolka Niger Delta ay tahay inuu helo saami aad uga badan gobollada kale.
Maqal Hargeysa: Maalgashiga waayadii hore
Hargeysa: Maalgashiga waayadii hore